हामी धेरै यस्तो यसलाई contraindicated छ जसलाई ती लागि वास्तविक कफी लागि मात्र विकल्प छैन जो, chicory रूपमा सुन्दर पेय संग बाल्यकाल देखि परिचित छन्। सबैभन्दा उपभोक्ताहरु पनि उपयोगी गुण को आफ्नो अति व्यापक दायरा बारेमा सुनेको छु। सबै को पहिलो, यो उपयोगी ठ्याक्कै के हो, गरेको थप पत्ता गरौं?
आज यो एक औषधीय बिरुवा साझा जताततै छ, हरेक दिन लोकप्रियता प्राप्त छ र झन् एक आहार पूरक रूपमा परम्परागत चिकित्सा को डाक्टर द्वारा सिफारिस गरिएको छ। तर, यदि ल्याउँछ लाभ chicory स्तनपान?
यसलाई भिटामिन मा धनी छ र खनिज बोट मधुमेह, tachycardia, atherosclerosis, रक्तअल्पता, हृदय र अन्य धेरै रोगहरु को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। पनि शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हो, यो बोट स्नायु प्रणालीको लागि उपयोगी छ जो एक शान्त प्रभाव, छ।
यसबाहेक, chicory को आंतों microflora, विरोधी-भडकाऊ, diuretic, astringent, anthelmintic र antipyretic कार्य सुधार गर्छ।
यो पेय लाभकारी गुण स्थानान्तरण गर्न अनन्त गर्न अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्छ, तर हामी कसरी उपयोगी chicory स्तनपानको प्रश्न रुचि राख्नुहुन्छ।
यस सन्दर्भमा pediatricians को दृश्य अक्सर diverge। जो GW मा एक सामान्य आहार स्थापना गर्न प्रयास जवान आमा केही सल्लाह, जबकि अन्य यो सिफारिस छैन, chicory मेनु समावेश गर्नुहोस्। किन डाक्टर को राय त यस्तो सरल प्रश्न diverge छ?
यो यति नै उत्पादन छानेर त्यतिबेला स्तनपान आमाहरु आफ्ना छोराछोरीलाई पूर्ण तिनीहरूलाई अलग प्रतिक्रिया छन् पाउन। सबै बच्चाहरु मा जीव भिन्न छन् किनभने यो छ र तिनीहरूलाई प्रत्येक एक विशेष उत्पादन यसको आफ्नै व्यक्तिगत प्रतिक्रिया छ।
संयमता बच्चाहरु र वयस्क र गर्भवती महिला, र नर्सिङ आमा को लागि उपयोगी मा chicory विशेष गरी बच्चा जीवन को पहिलो महिनामा, chicory स्तनपान उपभोग भन्ने तथ्यलाई बावजुद ध्यान लायक छ।
तपाईं कफी बिना जीवन कल्पना गर्न सक्दैन, यदि तर बच्चा हानि डराउँछन्, तपाईं सुत्केरी आमा एक विकल्प रूपमा chicory देखि एक पेय पिउन कि को विषय मा आफ्नो बाल विशेषज्ञ सल्लाह लिनुहोस्। सायद, तपाईं आफ्नो बच्चाको शरीर गर्न प्रतिक्रिया पालना गर्न पेय को एक कम खुराक सुरु गर्न प्रयास गर्न एक सिफारिस प्राप्त गर्नेछ। तपाईं जस्तै बच्चा मा colic, कब्जियत, वा एलर्जी कुनै पनि साइड इफेक्ट नोटिस भने, त्यसपछि तपाईं राम्रो यो पेय बच्चाको स्वास्थ्य को लागि डर बिना आनन्द सक्छ।
संग chicory प्रयोग गर्ने धेरै युवा आमा स्तनपान, यो रकम वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान दिनुहोस् स्तन दूध। तर कफी जस्तै, पनि अक्सर यो पेय प्रयोग नगर्नुहोस्। यसको अति उपयोगी गुण भए तापनि यसलाई ठिक्क पिउन आवश्यक छ।
आज पसलहरुमा तपाईं विभिन्न निर्माताहरु यो पेय को धेरै प्रकार पाउन सक्नुहुन्छ। chicory छनौट, 100% केंद्रित योगों गुणस्तर प्राथमिकता दिन बिना एलर्जी तपाईं वा तपाईंको बच्चा पैदा गर्न सक्छ कि अशुद्धताओं र additives cheapens।
Burmistrov दिमित्री: क्यारियर र उपलब्धिहरू
जब एक महिना पछि ovulation हुन्छ? समय "बी" गणना को विधिहरू
बालिका लागि आदर्श उचाइ - यो के हो?
प्रिस्कूल लागि शरद ऋतु को संकेत। बच्चाहरु को लागि शरद ऋतु बारेमा वचनहरू
Xiaomi बूटलोडर कसरी अनलक गर्न: कदम द्वारा निर्देशन निर्देशन
उद्यमको परिसमापन: प्रक्रिया। प्रक्रिया परिसमापन